Hebei Kexing Pharmaceutical Co., Ltd., oo la aasaasay 1996, waa shirkad tiknoolajiyad sare oo gaar loo leeyahay oo isku dhafan R&D, soo saarista iyo suuqgeynta waxsoosaarka caafimaadka xoolaha. Shirkadeena waxay kasbatay ku tiirsanaanta iyo taageerada macaamiil fara badan oo bilaw tayo sare leh leh, maareyn dhab ah iyo cilmiyaysan, tayo sare leh oo wax soo saar iyo adeeg cusub oo suuq gadayaal ah.
Shirkadeenu waxay leedahay caalami ahaan heerka dhirta wax soo saarka heerka koowaad. Waxaan ku maalgelinaynaa RMB60 million dhismaha warshadda weyn ee GMP oo ka kooban afar dabaq, oo wadarta guud ay tahay 7455 mitir murabac. Warshaddeennu waa mid ka mid ah dhirta ugu weyn ee diyaarinta daroogada xoolaha ee Shiinaha. Dhexdooda, waxaa jira lix xariiq oo wax soo saar siday u kala horreeyaan duritaanka biyaha, faleebo ballaaran, dareeraha afka, budada, kiniiniyada iyo jeermiska dila; saddex sadar oo budo ah.
Wax soo saarka sanadlaha ah sida soo socota: cirbadku wuxuu gaarayaa 15 milyan oo tan; faleebo badan ayaa gaareysa 150,000 oo dhalo, kiniiniyada waxay gaarayaan 150 milyan oo gogo ', budada waxay gaaraysaa 600 tan iyo waxyaabaha qasacadaysan waxay gaarayaan 1200 tan.
Wadarta qiimaha wax soo saarku wuxuu gaarayaa in ka badan 125 milyan. Siddeena khadadka waxsoosaarka firfircoon waxay soo martay shahaadada GMP ee Wasaaradda Beeraha Qaranka hal mar ilaa Sebtember 2004. Mashruuca wajigiisa 2, oo ay kujiraan hal xariiq soo saarida TCM iyo hal khad soosaar budo ah, dhismayaal xafiis oo dhameystiran iyo guryaha xayawaanka ee tijaabooyinka, ayaa kor u qaadi doona R&D iyo soosaarida awooda shirkadeena horay, iyo in la dhiso aasaas adag oo horumarinta ganacsiga dhoofinta.
Kexing waxay ilaalin doontaa wax soosaarka aaminka ah waxayna barri layaabi doontaa macmiil kasta!
Nooca Ganacsiga: Soo saare, Shirkad Ganacsi
Range Product: Qalabka Qalliinka Lafaha, Daaweynta Xoolaha
Products / Adeeg: Cirbadaha Caafimaadka Xoolaha, Xalka Caafimaadka Xoolaha, Powder Veterinary, Tablet Veterinary, Vetinary Disinfectant, Veterinary Premix
Wadarta Shaqaalaha: 201 ~ 500
Raasamaal (Milyan US $): 50,000,000RMB
Sanadka la Aasaasay: 1996
Cinwaanka Shirkadda: NO.114 Changsheng Street, Aaga Horumarinta Luquan, Shijiazhuang, Hebei, Shiinaha
Celceliska Waqtiga Lead: Waqtiga hogaaminta xilli ciyaareedka ugu sarreeya: 0, Waqtiga hoggaanka xilli ciyaareedka Off: 0
Qiyaasta Iibka Sannadlaha ah (Million US $): US $ 50 Milyan - US $ 100 Milyan
Cadadka Iibsiga Sanadlaha (Milyan US $): US $ 10 Milyan - US $ 50 Million
Boqolleyda Dhoofinta: 31% - 40%
Suuqyada waaweyn: Afrika, Ameerika, Aasiya, Bariga Yurub, Bariga Dhexe, Oceania, Suuqyo kale, Galbeedka Yurub, Adduunka oo dhan
Tirada Khadadka Wax Soo Saarka: 14
Tirada Shaqaalaha QC: 41 -50 qof
Adeegyada OEM ee la bixiyay: haa
Cabbirka Warshadda (Sq.meters): 30,000-50,000 mitir murabac
Goobta Warshadda: 114 Changsheng Street, Aagga Horumarinta Luquan, Shijiazhuang City, Hebei